Isidingo iholide okuphumuzayo kwabaningi - esiphuthumayo ngasiphi isikhathi sonyaka, ikakhulukazi, evuka entwasahlobo. Kukhona isifiso ukuya ukuphumula ehlathini, futhi, njengoba umthetho, phezu kwechibi - ne kebabs. Shashlik ku imvelo - kungashiwo, amazinga ukuzilibazisa, futhi kuyaqabukela uhlale namanje ngaphandle misebenzi. Futhi noma kunjalo, on the Lake ehostela - kuba indawo ekahle sehlo, futhi kuba ezijwayele Izivakashi eziningi.
Spring - isikhathi sonyaka ukubheka phambili umuntu ngamunye emva amakhaza asebusika. Lesi yisikhathi lapho wonke ukukhathala, sokungasebenzi nemibi, zanqwabelana phezu ebusika kungaba ngempela kalula bahlakazeka enhle entwasahlobo iholide emaphandleni, yokuchitha isizungu ngokwemvelo, evuka emva ebusika eside. entwasahlobo Phumula nakanjani ibe wusizo kuwo wonke umuntu!
Izivakashi eziningi ukuhlala isikhathi entwasahlobo beqonda njengoba off-inkathi, neminikelo yako ilinganiselwe kakhulu futhi amakhono ngokujwayelekile uphumule futhi ube nesikhathi esihle. Nokho, mangisho, ingqalasizinda iholide eRussia akuyona kuqondile ngakho, ekamu indawo endaweni, ehostela ikakhulukazi Spaster inokuthile ukunikela spring iholide ngakho kwakuthakazelisa.
Phakathi kwezinye izinto, ebheka phambili, kuyafaneleka wathi esikhathini ekwindla kanye entwasahlobo, wonke amasayithi ekamu, ukuzilibazisa izikhungo ngokuvamile ukunciphisa amanani futhi wenze izaphulelo abalulekile kwesizini. Spaster Camp site - okubandakanya, isibonelo, ehlala izindlu zokuhlala kukhona Isaphulelo 25%, kanye entsha zamanani aphansi ekwindla-ebusika kanye entwasahlobo izinkambo - ezingaphezu kuka-30%. Uhambo kuhlanganisa iqoqo amasevisi ngokuvumelana Uhla lwamanani ekamu isayithi kwesikhathi esifanele, kodwa at isaphulelo.
Spring amumethe Folk imikhosi (zomkhosi noma yokuvalelisa nobusika, imini amahlaya, njll) lapho ukuzijabulisa, ungaba kusayithi ekamu, ikakhulu njengoba kunokucindezela ihlelwe futhi ukuzijabulisa live imincintiswano kanye giveaways ukuthi nakanjani sibe nesithakazelo kubo bonke ophilayo.
Lesi sikhathi sonyaka kungaba bazimisele kakhudlwana ukuya izoso. Hlala phansi inkampani wobungani Gazebo nge izoso futhi barbequing, futhi kungaba, futhi isifiso sokuba ngibheme izinhlanzi. Futhi konke lokhu - ku isizinda nature enhle we Pskov esifundeni - ku echibini Spaster - efanelekayo amaqembu ezinkampani, futhi umndeni iholide kanye nenkampani.
Vuthululani ubuthongo ebusika kungaba iholidi esebenzayo! Ngokwesibonelo - ukudlala Paintball ithimba ethimba. On isayithi ekamu nje kuyinto emkhakheni ayihlomele. Noma mhlawumbe uhambo ngesithuthuthu noma isithuthuthu, ATV drive emgwaqweni adrenaline. Yonke enye into, ngezikhathi ezithile kudingeka uzithathele into ewusizo empilweni yakho. Futhi lokho ngesizathu esihle ukuze ube ride bike - ithuba elihle ukuchitha isikhathi omkhulu futhi ezishibhile ukuze lonke emaphandleni. Kulabo abafuna kwakuwukweqisa ekhethekile - njengenye indlela, Hot Air Ballooning! Yebo, lapha ungakwazi ukuhlela it! Kulabo abafuna ukuhlola ngokwabo ku ukunemba - kukhona ukudubula, emoyeni ngezibhamu, neminsalo crossbows. Ngemva ebusika, nechibi ncibilika - ungaphinda unike amandla kanye yesikebhe.
Futhi ngemva kosuku olunesivunguvungu - thatha umusi okugeza birch umshanelo, noma uphumule sauna Finnish!
Ungakwazi ukuhlela entwasahlobo athula ephelele futhi aziphumulele eziphumulele emaphandleni, phakathi imvelo Awakening!